Acoustic Panel Manufacturers and suppliers - China Acoustic Panel Factory
Ogige ụlọ egwuregwu nwere oghere mpịọkụ
Ejiri ogwe osisi MDF borad dị elu wee nwee okirikiri okirikiri nwere njiri mara gburugburu ebe obibi, ihe na -egbochi ire ọkụ na ọrụ mgbochi mmiri. agba dị iche iche na imecha chaise nwere ike imebi ihe niile chọrọ ịnụ ụda na ihe ịchọ mma nke ndị ahịa. ma e jiri ya tụnyere ogwe mkpọda nwere oghere, ogwe osisi nwere oghere nwere mmetụta ka mma megide mmetụta.
Eco N'uko na Mgbidi Acoustic panel osisi
A na -eji osisi MDF borad dị elu arụ osisi osisi acoustic ma nwee ọmarịcha gburugburu ebe obibi, ihe na -egbochi ọkụ na ọrụ anaghị egbochi mmiri. agba dị iche iche na imecha chaise nwere ike imebi ihe niile chọrọ ịnụ ụda na ihe ịchọ mma nke ndị ahịa. ma e jiri ya tụnyere ogwe mkpọda nwere oghere, ogwe osisi nwere oghere nwere mmetụta ka mma megide mmetụta.
Ogwe osisi MDF na -adọrọ mmasị
A na -eji ogwe osisi MDF rụọ osisi dị elu. Dabere na ihe chọrọ mma na ịchọ mma nke onye ahịa, ogwe osisi anyị nwere ọmarịcha nwere ike nwee gburugburu pụrụ iche, ihe na -egbochi ire ọkụ na arụ ọrụ mmiri, ọbụlagodi nwere ike nwee agba dị iche iche na nhọrọ imecha.
Ogwe osisi osisi, osisi acoustic
Ogwe osisi osisi, osisi acoustic bụ oghere dị n'ihu, gbarie azụ nke ogwe resonance ihe mebiri emebi nke nwere arụmọrụ ụda ụda ugboro ugboro dị ala. A na -ejikarị ya eme ihe na mma ụlọ na ngosipụta windo azụmahịa. Site na kọlụm a, anyị nwere ike ibi na ọmarịcha ebe nwere ike iwetara anyị anụrị dị mma. Ime ụlọ nwere ogwe a na -egosikwa oke ụtọ nke onye nwe ya.
Ime ụlọ eji achọ mma mdf Timber acoustic panel
Ogwe osisi osisi osisi bụ oghere dị n'ihu, gbarie azụ nke ogwe resonance ihe nwere oghere nke nwere arụmọrụ ụda olu dị ala nke ọma. A na -ejikarị ya eme ihe na mma ụlọ na ngosipụta windo azụmahịa. Site na kọlụm a, anyị nwere ike ibi na ọmarịcha ebe nwere ike iwetara anyị anụrị dị mma. Ime ụlọ nwere ogwe a na -egosikwa oke ụtọ nke onye nwe ya.
Mkpuchi ajị anụ, ogwe osisi ajị osisi, ajị osisi
Mkpuchi ajị anụ, ogwe osisi ajị anụ, ajị anụ ugbu a bụ onye ndu na gburugburu ebe obibi, arụmọrụ dị elu, ọnụ ahịa ngwaahịa ngwaahịa akụrụngwa. Ogwe osisi ndị a na -ahụ maka eriri na -arụ ọrụ nke ọma site na ịmịpụta ụda ka ọ na -egbochi ọkụ; gburugburu ebe obibi, ajị anụ na -adị mfe mmepụta; na ogwe dị n'ọtụtụ nha na agba dị iche iche nke enwere ike ịhazi ya ka ọ dabara na ihe ndozi ọ bụla.
Ogwe osisi ndị a na-eji ciment eme ihe na-adị mma ọ bụghị naanị na-ebi n'ime ụlọ nwere ụdị ihe dị iche iche, kamakwa ogwe osisi ajị osisi na-ebelata nsụghachi na ntụgharị site na ịmị ụda. Ogwe ajị anụ nwere ike gbanwee ihe ịchọ mma na ihe egwu nke oghere ime ọ bụla.
Ogwe simenti osisi ajị, osisi ajị anụ, mbadamba ajị anụ
Osisi simenti osisi ajị anụ, bọọdụ ajị anụ, ogwe osisi ajị anụ sitere na 65% eriri osisi poplar eke na 35% ciment portland, nke nwere njiri mara mma na ịchọ mma. Ụdị ihe ịchọ mma ọgbara ọhụrụ nke ogwe osisi ciment osisi nwere afọ ojuju na ọtụtụ mmadụ. Enwere ụdị ụcha enwere ike ịhọrọ, a na -enye eserese agba agba Vinco maka ntụnyere gị. A na -eji ogwe osisi ciment osisi osisi mee ihe maka ụlọ nrụtụ aka, ụlọ ngosi, ụlọ nzukọ.
Ogwe mgbidi 3d na -achọ mma, mkpuchi ụda na -ada ụda, mgbidi ụda
A na -eji osisi polyester mee 100% panel Acoustic a. Ihe a nwere ike nweghari 100 %. Dị ike, dị mfe iji, dị mfe ịhazi, enwere ike ịme ya n'ụdị dị iche iche dabere na mkpa dị iche iche. Ozi ndị a bụ kọmpụta ụda ụda ọkọlọtọ nke anyị ga -esi ebipụ ụdị ọ bụla ahaziri n'ihi ihe ndị ahịa chọrọ.
Mkpuchi ụda mkpọtụ, tile mgbidi ụlọ, ogidi mgbidi ụda
Mbelata mkpọtụ na oke njupụta
e mere eriri polyester dị ka owu owu coco site na teknụzụ dị elu, ọnụọgụ ụda olu kacha wee tụọ ruru 0.9.
udidi ihe eke dị maka ụdị agba dị iche iche ọgbara ọhụrụ.
Ogwe na -adọrọ adọrọ, ogwe ụda 3d, ihe na -adọrọ adọrọ, ogidi mgbidi na -enweghị ụda
Mbelata mkpọtụ na oke njupụta.
Ejiri eriri polyester dị ka owu owu coco site na teknụzụ dị ọkụ, ọnụọgụ ụda olu kacha wee tụọ ruru 0.9.
Eke eke eke dị maka ụdị agba dị iche iche ọgbara ọhụrụ.
Ime ụlọ ịsa ahụ, ogidi mgbidi, akwa a fụchiri afụ ọnụ, ụda ụda
Ime ụlọ, ogidi mgbidi, akwa a kpara akpa, ụda ụda nwere ụdị mmịpụta ụda dị ukwuu yana ọnụọgụ nnabata ụda dị elu, yana mmetụta nnabata ụda ka mma na obere, ọkara na elu. Nnukwu nguzogide okpomoku, nguzogide ịzeze, na ịka nká, nguzogide bụ njiri mara njiri mara nke panel panel. Njirimara ndị a na -enweta ọtụtụ ihe eji eme akwa panel.
Ọkwa nke nchekwa ọkụ ruru ọkwa mba B, yana nchekwa gburugburu ebe obibi bụ ọkwa mba E1. Site na ezigbo mgbanwe, a na -eji ogwe ihe eji eme akwa.